Fanavakavaham-pahafahana : Hanangana faritra aterineto misokatra ao amin’ny nosiny fizaha tany i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2018 9:53 GMT
Naneho ny hatezerany ny mpiseraseran'i Shina Tanibe manoloana ny tolo-kevitra avy amin'ny governemantan'i Hainan amin'ny hamelany ireo sehatra fampitam-baovao sosialy vahiny, izay voasivana ao Shina, ho azo idirana ao aminy.
Raha milaza izany, efa nofafana tamin'ireo sehatra media sosialy ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra mitsikera ilay drafitrasa. Eto ambany ny sasany nangonin'ny Radio France Internationale:
Tamin'ny Aprily 2018, nanambara ny filoha Xi fa nanapa-kevitra ny fahefana foiben'ny Antoko Komonista Shinoa fa hanohana ny planin'i Hainan hanangana seranam-barotra malalaka sy hanangana sehatra hanandramana ny fampandrosoana ara-toekarena.
Nahoana araka ny eritreritrao tsy nandraisan'i Mao [Zedong] an'i Hong Kong? Satria mila varavarankely [vava-rivotra] ry zareo? Raha tsy izany tsy nahavita namokatra sarimihetsika betsaka toy izany i Jiang Qing. Ny fanaovana an'i Hainan ho karazana Hong Kong no hanangana tanim-pianjoriahana ahafahan'ireo mahazo tombondahiny mifandray amin'ny kolontsaina tandrefana.
Hong Kong dia rafi-pitantanana manokan'i Shina manana ambaratongam-pizakantena avo. Chung Kin Wah, profesora iray ao Hong Kong, dia manaiky fa lohahevitra iray ao amin'ny tantara shinoa itony “fahalalahana manokana” itony. Nanoratra ao amin'ny seha-baovaon'olompirenena inmediahk.net izy:
Hong Kong sy Macau aloha hatramin'izao no hany tanàna (shinoa) roa misitraka ny aterineto. Ny fahafahan'ireo tanàna roa nozanahana fahiny ireo dia voasoratra ao anatin'ny lalampanorenana bitika ao anatin'ny fotokevitra “One Country, Two Systems” [Firenena Iray, Rafitra Roa] rehefa naverina tamin'i Shina tamin'ny taona 1997 sy 1999 ny fiandrianam-pireneny.